ILO Yoyambira Zimbabwe nezveKushandiswa kweFacebook neWhatsApp Mukunyengedzwa kweVanhu Kuenda Muhunhapwa
Mumwe mukuru muhofisi yesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO muZimbabwe neNambia akaudza komiti yedare reSenate muHarare nhasi kuti vamwe vanhu vanoshambadzira mabasa pamadandemutande akaita seFacebook ndivo vari kukwezva vanhu kuti vagume vapinda muhunhapwa kana kuti human trafficking.
VaAdolphus Chinomwe, mukuru weILO vaudza komiti yedare reSenate kuti madandemutande mazhinji ari kushandiswa anenge asina kunyorweswa zviri pamutemo. Vanhu vanenge vanyeperwa kuti kune mabasa vanozoguma vobatwa senhapwa kana kubatwa chibharo.
Vatiwo madandemutande akaita seFacebook, Twitter neWhatsApp ndiwo avewo kushandiswa zvakanyanya nemakoronyera aya kukwezva vanhu kuenda kunze kwenyika vachivimbiswa mabasa anobhadhara mari yepamusoro kana kuvimbiswa nzvimbo dzechikoro.
VaChinomwe vati basa rekutengesa vanhu kana kuti human trafficking, rine mari yakawanda chose zvekuti pagore rega rega pasi rese rinoburitsa mazana matanhatu emabhiriyoni emadhora.
VaChinomwe vati zvakakosha kuti dzihurumende dziongorore vanhu vanoita izvi.
Vanotiwo zvakakosha kuti hurumende inyorese kana kuvanechekuita nevanhu vayo vanenge vachibuda munyika vachiti izvi zvinogona kubatsira kuti vaye vanenge vachishanda kunze kana vachinge vapinda mumatambudziko vakwanise kuwana rubatsiro.
Vaenderera mberi vachiti nyaya yekubuda kwevanhu munyika vachinotsvaga basa kana kuenda kunoshanda inonetsa nekuti kazhinji kazhinji vanhu vanongobuda munyika vasina kutaura kwavari kuenda uye vamwe vanongoenda vasina ruzivo rwekwavanoenda.
VaChinomwe vati handi vashandi vemumba chete vanobatwa chibharo kana kushandiswa senhapwa vachiti kana vanhu vakadzidzira mabasa avo mumakoreji nemaUniversity pamwe nevatambi vebhora nemimwe mitambo vari kubatwa nemambure aya.
Vatiwo zvinonetsa kurambidza vanhu kuti vasabude munyika kunotsvaga mambasa sezvo kuita izvi kuri kutyora kodzero dzavo.
Sachigaro vekomiti iyi, Rtd General Mike Nyambuya, vati komiti yavo inoshushikana chose nekubuda kwevanhu munyika vachinobatwa chibharo kunze kwenyika uye vanoti vari kuita ongororo yekuona kuti kodzero dzevanhu vemuZimbabwe hadzisi kutyorwa here.
VaChinomwe vati nyika inogona kuwana mari yakwanda chose kana ikaronga nekuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda kunze zvagara zvakanaka.
Gore rapera munyika makamboita dambudziko guru mushure mekunge mamwe madzimai apinda muhunhapwa kunyika dzakaita seKuwait neSaudi Arabia. Hurumende yakatozomanikidzwa kuti ipindire mushure mekunge vakawanda vachema chema nemabatirwo ezvizvarwa zveZimbabwe izvi.
Zvinofungidzirwa kuti vanhu vari pakati pemamiriyoni makumi maviri nematatu vari muhunhapwa munyika dzepasi rino.
Bazi reUnited States Department rinoti vanhu vari pakati pezviuru mazana matanhatu kusvika zviuru mazana masere vanopinzwa muhunhapwa vanosvika makumi masere kubva muzana vari madzimai uye vamwe vakawanda vari vana vadiki.